वाइफाईको पासवर्ड, कसरि थाहा पाउने ? सिक्नुहोस ! – Dnewsdaily.com- धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार ११:५१
इन्टरनेट अहिले हरेक मानिसको अभिन्न अंग बनेको छ । इन्टरनेट विनाको जिन्दगी धेरैले कल्पना गर्न पनि नसक्ने भईसकेको छ । इन्टरनेट विनाको जिबन कल्पना गर्न पनि सकिदैन । मानिसलाई पर्ने हर किसीमको समस्याको समाधान इन्टरनेटको माध्यमबाट हुन थालेको छ । नेपालमा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट काम गर्ने मानिसको संख्या विस्तार विस्तार बढदै गइरहेको छ अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन ।
सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन के गर्ने त र हामीले केही यस्ता मोवाइल एपबारे उल्लेख गरेका छौं, जसको प्रयोगबाट तपाईलाई सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने छ ।
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार ११:५१ मा प्रकाशित